Izifundo zamva nje ze-2019 kwiHormone Hormone Hexarelin
I-2019 Izifundo zamuva kwiHymon Growth Hexarelin
Julayi 16, 2019
Yonke into ngoHexarelin
1. IHexarelin Imbali kunye noBume
2. Impahla yeHexarelin kunye nendlela iSebenza ngayo
3. Iimpembelelo zeHexarelin
4. Imiphumo emibi yeHexarelin
5. Usetyenziso lweHexarelin
6. Thenga iPeptide Hexarelin online
I-Peptide Hexarelin yihomoni yokukhula ebizwa ngokuba yi-Examorelin. Iyeza lelika-secretagogue okanye uhlobo lwe-GHSR lokukhula kwehomoni. I-Hexarelin isebenza ngendlela efanayo ne-GHRP-6, kodwa kuthiwa inamandla ngakumbi kuba ivuselela imveliso yokukhula kwamahomoni emzimbeni wakho. Izifundo ezahlukeneyo zikwabonisa ukuba iHexarelin yeyona GHRH yomeleleyo ifumaneka kwintengiso. Nangona kunjalo, iziphumo zisenokungafani ngenxa yokuba imizimba yabantu yahlukile, kodwa ukuba uthatha idosi eyiHexarelin eyiyo kwaye unamathele kwimiyalelo kagqirha, uya kuba namava amahle. Inkqubo ye- Umthombo weHexarelin Kukwabalulekile ukuba uqwalasele xa uthenga eli chiza. Ungasoloko uthenga iHexarelin kwi-intanethi kwiwebhusayithi yethu.
2. Hexarelin Pi-roperties kunye Hifunyenwe Works
Hexarelin (140703-51-1) yenziwe ngetyathanga leamino acid ethi, xa ilawulwa kwinkqubo yomzimba wakho, ibangele amadlala akho obuchopho ukuba avelise ngakumbi okanye ngokuthe chu amanqanaba okukhula kwamahomoni. Okwangoku, akukacaci ukuba ichiza lisebenza njani kanye xa lingeniswe emzimbeni wakho, ngakumbi xa kuthelekiswa ne-GHRP-6 yesiqhelo. Ngaphandle koko, kukho ubungqina obaneleyo bokubonisa ukuba i-peptide Hexarelin sisixhobo esinamandla se-GH kwaye ihambisa iziphumo ezisemgangathweni xa zisetyenziswe ngokuchanekileyo.
Ngakolunye uhlangothi, iinkcukacha zesayensi kunye neengxelo zibonisa ukuba ukusebenzisa Peptide Hexarelin yandisa amanqanaba eprolactin kunye ne-cortisol emzimbeni wakho ngaphezu kwalo naliphi na elinye ichiza lokukhula kwehomoni kwintengiso yanamhlanje. Amanqanaba aphuculweyo eprolactin kwinkqubo yakho yomzimba ayinakubaluleka njengoko kunokuba njalo xa uthatha ii-anabolic steroids ezithile. Nangona kunjalo, amanqanaba eGhrelin kwinkqubo yakho yomzimba awayi kuphuculwa leli chiza njengoko kunjalo xa usebenzisa i-GHRP, nangona inekhemikhali efanayo neHexarelin.
Izifundo zibonakalisile ukuba iHexarelin yenye yezona zinto zikhawulezayo zokukhulisa iihomoni ezikhoyo kwintengiso. Nangona kunjalo, iyeza liyayeka ukusebenza emva kwexesha elithile lokusetyenziswa. Ngokwesiqhelo, iihormone zakho zokukhula kufuneka zikhule ngokukhawuleza kwiiveki ezine zokuqala zedosi. Nangona umjikelo unokuba mde ngokuxhomekeke kwingcebiso kagqirha wakho, uphononongo lubonisa ukuba kuncinci izibonelelo zokuthatha iHexarelin ngaphezulu kweeveki ezili-16. Kuya kufuneka uthathe ichiza malunga neeveki ezisi-8 ukuya kwezi-12 emva koko uthathe ikhefu lokulinganisa malunga neeveki ezintandathu. Ukusetyenziswa kweHexarelin akuthinteli ukuveliswa kwendalo kokukhula kwehomoni ngamadlala akho ebhinqa njengokuba kunjalo xa usebenzisa izongezo ze testosterone.
Nangona eli liyi-hormone ye-hormone yokukhula, iHexarelin inika iziphumo ezahlukahlukeneyo kubasebenzisi. Abadlali bebhola badla ngokusetyenziswa kwesi sidakamizwa kuba kunceda ekwakheni izihlunu ezinamafutha nokuphucula amandla omzimba jikelele. Kwiimjikelezo zokusika, iHexarelin inceda ekugcineni amanqanaba aphantsi omzimba kunye nokuphucula izinga lokubuyisela amathisiti. Ukutya okufanelekileyo kunye nomsebenzi uphinde ubambe indima ebalulekileyo ngexesha IHexarelin kuba zibeka umgangatho weziphumo oza kuzinandipha. Unokudibanisa isilwanyana kunye ne-anabolic steroids ukuze ujonge izibonelelo eziphezulu. Ngeempembelelo ze-anabolic, awuyi kubakho ncinane xa uthatha iHexarelin yedwa.
Isilwayo senza i-season-excellent-season okanye yokunciphisa umjikelezo wokujikeleza njengoko kuphucula umthamo wegazi, ngaloo ndlela kuphucula ukulahlekelwa kweoli. AmaMediki anikezele ubungqina bendlela u-Hexarelin anceda ngayo ukuhlaziywa kwemisipha, ingakumbi kubadlali abaqhuba umsebenzi omkhulu. Kufuneka uqaphele ukuba uHexarelin akayikukubeka kuyo nayiphi na imiphumo ye-anabolic kwaye inokunyusa izinga lokutshisa amafutha omzimba, okwenza kube yimveliso efanelekileyo yokusika imijikelezo.
Ukongeza, iHexarelin inikeza iintlobo ezahlukahlukeneyo zokuphucula nokuphulukisa kubasebenzisi ngokucwaninga okwenza kube nye yeep peptides ezilungileyo kwiimarike. I-Hexarelin isisombululo sexesha elifutshane esinika izibonelelo ezilandelayo zokufumana;
Unceda ekuphulukisweni kwamalungu kwaye kulungile kubadlali abaninzi
Ukuqiniswa nokuphuculwa kwenkqubo ye-neural
Izibonelelo ekulungiseni izicubu kunye namafayili emisipha
Ukuphucula ubukhulu beethambo
Ukhusela intliziyo yakho, equka ukuphilisa izicubu ezinobumba kunye nokuphucula uxinzelelo lwe-ventricle.
Njengalo naliphi na elinye ichiza, i-peptide Hexarelin inokukuveza ngeziphumo ebezingalindelekanga, ngakumbi ukuba utyebile okanye usilele ukulandela imiyalelo yedosi. Ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga zibandakanya;
Amanqanaba okwanda kweprolactin
Ukuphucula amazinga e-cortisol
Yintoni endifanele ndiyazi ngaphambi kokuthenga iPeptide Alarelin?
Iyeza leyeza lilawulwa nge-injection subcutaneous. I-peptide iHexarelin ikhona ngefowuni emele ilungiswe ngokuyongeza kwi-bacteriostatic water. Hexarelin (140703-51-1) idosi efanelekileyo imalunga ne-200mg ngosuku kwaye isebenza kakuhle kakhulu kwizibonelelo zonyango. Nangona kunjalo, ngokuxhomekeke kwimeko yakho okanye amandla akho omzimba, ugqirha wakho unokunyusa i-Hexarelin injection dosage malunga ne-400mgs ngosuku. Idatha evela kwizifundo ezenziwa ngabaphengululi bezonyango ezahlukeneyo zibonisa ukuba izibonelelo ziyafana, nokuba uthatha ngaphezulu kwe-200mgs ngosuku. Ke ngoko, ukuthatha idosi engaphezulu akuthethi ukuba uya kuba nayo nayiphi na into eyongezelelweyo. Isitaki seHexarelin sikwabonelela ngamava amahle eHexarelin.
Ubuninzi beziyobisi zeGH ziyafumaneka kwi-Intanethi, kwaye unokuhlala wenza iodolo yakho kwinduduzo yekhaya lakho. Singumthengisi ophambili weHexarelin kwingingqi. Senza ukuhambisa kwangexesha kwihlabathi liphela. Iwebhusayithi yethu iyasebenziseka, ngenxa yoko unokuhamba ngokulula usuka kwenye imveliso uye kwenye usebenzisa i-smartphone, ithebhulethi okanye idesktop. Nangona kunjalo, sihlala sicebisa abathengi ukuba balumke xa bekhetha umthengisi weHexarelin olungileyo. Sukwenza nje iodolo kuwo nawuphi na umthombo weHexarelin ohlangane nawo. Yenza uphando lwakho kwaye ukhethe umthengisi weHexarelin ohloniphekileyo nonamava.
Kwelinye icala, qiniseka ukuba uyayiqonda into ethethwa yimithetho kwilizwe lakho ngokuthenga, ukungenisa elizweni, okanye ukuba neepeptide Hexarelin. Siyinkampani egcina umthetho, kwaye asizukuthanda ukubeka abathengi bethu abathembekileyo engxakini noorhulumente babo. Umzekelo, e-US, ukuthenga i-Hexarelin kwi-Intanethi kusemthethweni kuphela xa uyisebenzisela iinjongo zophando. Nangona kunjalo, akukho semthethweni xa uthenga iHexarelin ukuze uyisebenzisele ngokwakho. Qinisekisa ukuba ufumana uqeqesho ngenaliti yeHexarelin ngaphambi kokuba uqale ukuthatha idosi.
Isishwankathelo, ukukhula kwehomoni iHexarelin iphakathi kweepeptide ezinamandla kakhulu kumashishini. Nangona kunjalo, kubiza ngaphantsi kweHGH eqhelekileyo kwaye kunika izibonelelo ezinkulu kumsebenzisi. Okwangoku, akukho datha eninzi malunga neziyobisi, kodwa ke izifundo ezikhoyo zibonisa ukuba Hexarelin powder ihambisa iziphumo ezisemgangathweni. Qinisekisa ukuba ufumana iyeza kumthombo othembekileyo weHexarelin ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Thatha inaliti efanelekileyo yeHexarelin kwaye ugcine imiyalelo yedosi. Kwimeko yayo nantoni na yazisa ugqirha wakho kwangexesha.